कीडे | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! कीडे | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
धेरै sequels पछि धेरै-प्रेम भिडियो गेम अब नीलो छापा गेमिङ द्वारा एक भिडियो स्लट मा रूपान्तरित गरिएको छ र यसलाई कीडे रूपमा जानिन्छ. यो क्यासिनो के तपाईं राख्नुहोस् विन slot comes with three different bonus rounds and all of them carry huge win potential.
कीडे को विकासकर्ता बारेमा
पछिल्लो मा 50 वर्ष, नीलो छापा गेमिङ अफलाइन र अनलाइन दुवै क्यासिनो लागि विभिन्न रचनात्मक खेल विकास भएको छ. कम्पनी द्वारा विकसित खेल witty र मनोरंजक गेमप्लेको छ. यो क्यासिनो के तपाईं राख्नुहोस् विन स्लट तिनीहरूलाई विकास अर्को रमाइलो स्लट छ.
यो पाँच संग पचास paylines स्लट एक छ रील क्यासिनो के तपाईं राख्नुहोस् विन स्लट. एउटै शीर्षक को भिडियो खेल 90 का मा खेलाडी संग एक विशाल हिट थियो. मूल निर्माताहरू संग सहकार्य नीलो छापा द्वारा स्लट संस्करणमा सैन्य ग्रेनेड फायर नै कीडे reprized छन्. यो शर्त रकम प्रति स्पिन £ 100 प्रति स्पिन 50p देखि दायरा. यो क्यासिनो के तपाईं राख्नुहोस् विन स्लट मूल खेल को महसूस र चरित्र कायम रहन्छ. को प्रतीक केही पोकर कार्ड प्रतिमा अलग्गै मौलिक संस्करण बाट वर्ण हो.
यो स्लट को बोनस सुविधाहरू छन्:
कृमि बोनस- यो बहु-स्तर राउन्ड तीन मध्य रील मा तीन crate बोनस छरिन्छ लैंडिंग सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने छ. बोनस पहुँचबाट गरेपछि बोनस crate तीन सुविधाहरू एक अनलक जो छनोट गर्न आवश्यक राउन्ड.
Crate भागो बोनस- आक्रोशित Scot प्रकट तपाईं एक नगद रकम पत्ता लगाउन जहाँ तपाईं बाकसभित्र छनोट गर्न छ यो खेल प्रविष्ट दिनु हुनेछ, चिकित्सा किरा, वा हतियार. चिकित्सा किरा यसलाई सुधार गर्दा आफ्नो कृमि को स्वास्थ्य एक हतियार द्वारा कम छ.
ठाउँ ट्रेल बोनस- अन्तरिक्ष कीडा तपाईं एक उपकरणबक्स स्पेस निशान मा अघि बढाउन खेलकुद चयन जहाँ तपाईं यो खेल प्रविष्ट बनाउँछ. Teleport को निशान मा एक उच्च स्थिति आफ्नो कृमि पठाउँछ. तर हतियार पनि कृमि आक्रमण र यो त हिट छ भने राउन्ड त्यहाँ खत्म.
निःशुल्क Spins युद्ध बोनस- यो खेल अनलक गर्न ड्रिल सर्जन्ट कीडा प्रकट. युद्ध कीडे फरक परिणाम संग केन्द्रिय रील प्रदर्शित हुनेछ. को Medi-किरा यसलाई सुधार गर्दा आफ्नो स्वास्थ्य समुद्री डाकू कीडा द्वारा कम छ. त्यहाँ निःशुल्क spins यहाँ कुनै सीमा छ तर आफ्नो स्वास्थ्य शून्य पुगेपछि तिनीहरूले समाप्त.
यो क्यासिनो के तपाईं राख्नुहोस् विन स्लट आकर्षक बोनस राउंड्स एक ठूलो खेल छ. जबकि 90 का बाट लोकप्रिय भिडियो खेलको आकर्षण कायम राख्ने भएको स्लट ठूलो देखिन्छ.